AC EV Yekuchaja Chiteshi Vagadziri & Vatengesi | China AC EV Yechaja Chiteshi Fekitori
Commercial Electric OCPP 1.6Jason 2.0J Inoenderana 22kw Smart EV Yekukurumidza Chaja Chiteshi
Muenzaniso Zita JNT-EVCP2-07C2S-00 JNT-EVCP2-22C2S-00 Input Power Supply 1P + N + PE 3P + N + PE Rated Voltage 230V AC 400V AC Rated Current 64A 64A Frequency 50 / 60Hz 50 / 60Hz Output Output Voltage 230V AC 400V AC Maximum Yazvino 2x32A 2x32A Rated Simba 2x7kW 2x22kW Mushandisi Interface Charge Connector T2 / T2S socket Yakavharidzirwa simbi kwakakurudzira Kuruboshwe / kurudyi Panel Polycarbonate LED Inoratidza Green / Yero / Tsvuku LCD Ratidza 4.3, screen RFID Reader Mifare ISO / IEC 14443 A ...
Ac 2 * 22kw 64A EV Magetsi Mota Bhatiri Mutengo Charge Chiteshi Ev Chaja
Muenzaniso Zita JNT-EVCP1-07C2S-00 JNT-EVCP1-22C2S-00 Input Power Supply 1P + N + PE 3P + N + PE Rated Voltage 230V AC 400V AC Rated Current 64A 64A Frequency 50 / 60Hz 50 / 60Hz Output Output Voltage 230V AC 400V AC Maximum Yazvino 2x32A 2x32A Rated Simba 2x7kW 2x22kW Mushandisi Interface Charge Connector T2 / T2S socket Yakavharidzirwa simbi kwakakurudzira Kuruboshwe / kurudyi Panel Polycarbonate LED Inoratidza Green / Yero / Tsvuku LCD Ratidza 4.3, screen RFID Reader Mifare ISO / IEC 14443 A ...
EV Kutengesa Chiteshi Wall-Yakakwira Electric Charger Wallbox EV Charger Point 40A
Fekitori yakanyanya kutengesa US Type 1 EV Imba Chikamu 2 Chaja, EV Yekuchaja Chiteshi, Tinogamuchira mukana wekuita bhizinesi newe uye tinotarisira kuve nemufaro mukubatanidza rumwe ruzivo rwezvinhu zvedu. Yakanaka mhando, yemakwikwi mutengo, kubata nguva kuendesa uye basa rakavimbika rinogona kuvimbiswa. Zvekuwedzera kubvunza haufanirwe kuzeza kutibata isu.
Type 2 16A 11kw EV Charger yeMagetsi Motaja Kutaja
Sangano redu rinovavarira kushanda zvakatendeka, kushandira kune vese vatengi vedu, uye kushanda muhunyanzvi hutsva uye muchina mutsva nguva dzose kuMugadziri weChina 62196-2 Kubhadharisa EV Zviteshi neRudzi rwechipiri Plug 11kw, Bhizinesi redu rinochengetedza rakachengeteka uye riine bhizinesi rakasanganiswa nezvokwadi uye kutendeseka kunobatsira kuchengetedza kudyidzana kwenguva refu nevatengi vedu.
Fekitori yakanangana 50A 250V AC Type1 Magetsi Magetsi Cheja Charger American Standard Evse Cable Rudzi rwe1
Fekitori yakanangana China EV Inokurumidza Chaja, EV Chaja, Isu tanga tiri mukuenderera mberi nebasa kune vedu vari kukura vemuno uye vekunze vatengi. Isu tinovavarira kuve mutungamiri wepasirese mune ino indasitiri uye nepfungwa idzi, mufaro wedu mukuru kushandira pamwe nekuunza mwero wepamusoro wekugutsikana pakati pemusika uri kukura.
SAE J1772 Magetsi Mota Bhatiri Chaja 32A ine ETL Chitupa
OEM Supply China Chaja EV, Electric Car Charger neLCD, Kambani yedu inogadza madhipatimendi akati wandei, kusanganisira dhipatimendi rekugadzira, dhipatimendi rekutengesa, dhipatimendi rekudzora mhando uye sevice Center, nezvimwe. chete yekuzadzisa chigadzirwa chemhando yepamusoro kusangana nezvinodiwa nevatengi, mhinduro dzese dzakanyatso kuongororwa isati yatumirwa. Isu tinogara tichifunga nezvemubvunzo padivi pevatengi, nekuti iwe unokunda, tinokunda!
Kupisa Kupisa kweChina SAE J1772 EV Recharge Station ine Type 1 Cable
Hot Kutengeswa kweChina SAE J1772, Recharge Station, Yakanaka mhando inouya kubva mukuteerera kwedu kune zvese zvese, uye kugutsikana kwevatengi kunobva mukuzvipira kwedu kwechokwadi. Tichivimba nehunyanzvi hwemberi uye indasitiri mukurumbira wekudyidzana kwakanaka, tinoedza nepatinogona napo kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi kune vatengi vedu, uye isu tese tinoda kusimbisa kuchinjana nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika pamwe nekubatana kwechokwadi, kuvaka ramangwana riri nani.
EV Yekuchaja Bhokisi EV Chaja yeMagetsi Mota 40A Type 1 Plug
Joint EVC10 EV charger ndiyo yedu nyowani, inokurumidza uye yepamberi Level Level 2 charger, kuchaja kusvika ku50 amps uye kuwedzera kusvika makumi matatu nemaviri mamaira ekutyaira renji paawa yekuchaja. EVC10 EVSE charing chiteshi inogona kuiswa kubhadharisa pa16 amps kusvika 50 amps, ichibvumira vatyairi kuti vatore kumhanya kwakaringana ivo nemagetsi emba yavo. Veruzhinji Charge Point inogona kuiswa nechero magetsi, yemukati kana yekunze, kubhadharisa pa16A kusvika 50A, uye inouya ne18 / 25-tsoka yekuchaja tambo uye ingave NEMA 14-50 kana 6-50 plug.
Chikamu 2, 240 volt mota yemagetsi (EV) yekuchaja chiteshi chiteshi
Chikamu chechipiri, 240 volt mota yemagetsi (EV) chiteshi chechaji chinobhadharisa chero EV kusvika 9X nekukurumidza kupfuura yakajairwa madziro nzira, ine inoshanduka amperage marongero anosvika makumi mashanu amps (14A-50A) uye plug-in kana hardwired kuisirwa. Iine 3-gore rakatemerwa garandi uye ETL yakanyorwa kuitira kuchengetedzwa kwemagetsi, yedu EV kuchaja iri nyore kune chero yemagetsi kuisa mukati kana kunze. EVC10 magetsi vechile majaja chiteshi cheWi-Fi-chinogonesa uye chinopa maficha ekuchaja zvine hungwaru uchishandisa iyo programu, kusanganisira kugona kuseta purogiramu yekuchaja, tora zviyeuchidzo zvekuvhara mukati, ona nhoroondo yako yekuchaja munzvimbo imwe chete, batanidza ne Alexa , uye nezvimwe.
Gadzira US yakajairwa EV Charger Unit yeMagetsi Mota ine Type 1
Manufactur standard China SAE J1772, Type 1 Plug, Tinotarisira kuva nehukama hwekudyidzana kwenguva refu nevatengi vedu. Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu uye mhinduro, ndapota usazeza kutumira kubvunza kwatiri / zita rekambani. Isu tinoona kuti iwe unogona kunyatsogutsikana nemhinduro dzedu dzakanakisisa!
Socket Type 2 32A 22kw Chitatu Chikamu EV Kutengesa Zvivakwa EV Charger yeMagetsi Motaji Kutaja
Quots yeChina EV Yekuchaja Point, EV Kutengesa Zvivakwa, Tine timu yakanaka kwazvo inopa basa rehunyanzvi, mhinduro yekukurumidza, kuendesa panguva, yakanakisa mhando uye mutengo wakanakisa kune vatengi vedu. Kugutsikana uye yakanaka kiredhiti kune wese mutengi ndiyo yedu yekutanga. Tiri pachokwadi kutarisira kushandira pamwe nevatengi pasi rese. Tinotenda tinogona kugutsa nemi. Isu tinogamuchira neushamwari vatengi kuti vashanyire kambani yedu uye vatenge zvigadzirwa zvedu.